Fifandraisana fifandraisana ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Contact teny
Soraty ireo sosokevitrao, faniriana na hevitra momba ny asan'ny vavahadinay Journey-assist.com
Ny e-mail (tsy voatery)
Torohevitra manampy amin'ny fandaminana ny dia lavorary
Fametrahana valizy / kitapo mety
Adidy amin'ny sidina
for - Mazava ho azy dia ny hafainganam-pandehan-drivotra. Indrindra fa rehefa nanao dia lavitra. Fa ny hafainganam-pandeha dia voalohany, mitahiry ny fotoana sarobidy aminao. Mitaky fiara amin'ny alàlan'ny fiaran-dalamby mandritra ny ora iray ianao mandritra ny andro iray. Ary koa, ny sidina dia ekena fa misy fomba fitaterana azo antoka. Amin'ity lafiny ity dia faharoa an'ny lamasinina fotsiny izy ireo.
manohitra - Fameperana entana feno entana. Toy ny fitsipika, ity dia 5-8 kg ho an'ny kitapo tanana, ary 23-30 kg ho an'ny entana ho an'ny entana ho an'ny mpandeha tsirairay. Mila mandoa vola be ianao vao mila andiana entana. Hentitra ny fameperana mikasika izay azo ampiharina. Amin'ny kitapo tanana, ohatra, dia tsy afaka mitondra ranon-tsaka ianao ao anaty fitoeran-drano mihoatra ny 100 ml. Ary koa, tsy misy zavatra mampalahelo (hety, rakitra fantsika, mpandoto fiara, sns). Izany rehetra izany dia tsy maintsy raisina raha te-hitety hazavana (amina kitapo tanana fotsiny). Ho fanampin'ny tena faharetan'ny sidina dia mila manampy adiny roa amin'ny fotoana hialana ianao (ny fotoana ilana anao any amin'ny seranam-piaramanidina mba hijery ny fisafoana sy fisavana, ary farafaharatsiny adiny iray aorian'ny fotoana hahatongavana (fifehezana pasipaoro sy fitakiana entana). tanàna, ary ity ny vidiny fanampiny ho an'ny serivisy famindrana, ary ny seranam-piaramanidina dia tsy hita manerana ny tanàna rehetra, izay mety hiteraka fanelingelenana ihany koa.
for - Ny fitsangatsanganana amin'ny lamasinina no fomba mora indrindra mora azo. Ny haavon'ny lalamby sy ny lalamby any amin'ny saika ny firenena rehetra dia avo noho ny haben'ny seranam-piaramanidina indraindray. Ny toeram-piantsonana, toy ny fitsipika, dia eo afovoan-tanàna, ary mahatahotra ny famindrana io. Eo amin'ny fiaran-dalamby koa dia afaka mitondra sakafo sy zava-pisotro ianao amin'ny habetsaky ny ekena. tsy misy fetran'ny karatra toy ny fitsangatsanganana rivotra. (raha ny toerany dia 50 kg ny fetran'ny kitapo tanana). Afaka mandry amin'ny lamasinina ianao amin'ny alàlan'ny fahatongavana. Noho izany dia azonao atao ny miampita amin'ny alina ary mankafy ny mpizara mandritra ny andro. Mandritra izany fotoana izany, dia afaka mitahiry amin'ny hotely ianao. . Mora izany raha toa ka miaraka amin'ny fianakavianao na orinasa ianao, afaka mividy efitrano iray ianao, ary mahaliana ny mandany fotoana eny an-dalana. Ny fiaran-dalamby no fomba fitaterana azo antoka indrindra. (ny fitsangatsanganana lalamby azo antoka indrindra any Amerika, avy eo any Eropa, avy eo any Rosia, ary ny firenena Azia toa an'i India sy Sri Lanka, mijanona ao ambadiky ny fiarovana.
manohitra - Fomba somary milamina io dia lavitra io. Tsy toy ny Auto, ny fiaran-dalamby dia tsy hijanona izay toerana tianao. Ny haavon'ny fionona dia miankina amin'ny karazana fiara izay nividiananao ny tapakila. Ilay seza voatokana mitovy, tsy ilay toerana mahasoa amin'ny tontolon'ny lamasinina ary mety tsara amin'ny dia fohy.
for - Ny fiara amin'ny fiara dia ny fahalalahana asa indrindra. Azonao atao ny mampiato fotoana amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, na ny wag mana-dalana mankany amin'ny toerana tsy ahitana planina. Ary toa an'i Avia, afaka miampita ny sisintany amin'ny alàlan'ny fiara ianao miaraka amin'ny sakafo sy zava-pisotro. Ny fisian'ny "snacks" rehefa mandeha fiara, dia manavotra ny volanao sy ny fotoana. Ny fiara dia fiarovana amin'ny toetrandro, fahafaha-mifindra haingana eo anelanelan'ny toerana mahasarika, ary ny fahaizana mitondra izay rehetra ilainao amin'ny làlana. Tsy misy fahazoan-dàlana ho an'ny entana; voafetra amin'ny herin'ny fiara fotsiny ianao.
manohitra - Ity fomba ity dia tsy mety amin'ny fitsangantsanganana intercontinental. Miadana kokoa raha oharina amin'ny rivotra. Ary raha mila maka fotsiny avy hatrany amin'ny teboka B ka hatrany B, dia angamba tsy ny fomba tsara indrindra ny fiara. Somary mandreraka ihany koa ny mitondra fiara mandritra ny ora maro. Mandritra izany fotoana izany, misy foana ny loza ateraky ny lozam-pifamoivoizana na lozam-pifamoivoizana. Ary na dia mamaha ireo olana ireo aza ny fiantohana, dia mety hisy fiantraikany amin'ny drafitrao izany.
for - Ny fitsangatsanganana fitateram-bahoaka no lasa malaza hatrany (indrindra any Europe). Ara-toekarena dia mahasoa kokoa noho ny fomba hafa andehanana, ankoatra ny fiaran-dalamby. Ary amin'ny fitsangatsanganana amam-bisy koa dia zotra mahasintona mahasamihafa. Amin'ny fitsidihana toy izany dia ahita ny tanàna sy ny tanàna ambanivohitra. Amin'ny fotoana fohy indrindra dia afaka mahita firenena maro ianao. Rehefa mitsangatsangana, tarika mikarakara ny fitsangatsanganana toy izany dia tsy tokony hijoro araka ny toerany. Tsy mila miatrika olana momba ny fandaminana. Ny zavatra rehetra dia atao sy dinihina ho anao. Amin'ny maha-fitsipika anao, mpitari-dalana mpitari-dalana dia miaraka aminao, izay azonao alahanao ny fanontaniana rehetra.
manohitra - ny minus voalohany dia ny bus ihany. Manokàna fotoana be ao anaty seza tsy dia milamina. Raha mora tohina aretina, dia tsy ho anao io fomba fitetezana io. Ny alina dia mijanona eo amin'ny sisin-tany. Matetika no fialam-boly tsotra ihany no tafiditra ao amin'ny vidin'ny fitsangatsanganana toy izany. Ny mpiara-mitety dia mety ho samy hafa. Tanora be sy izay maniry mangina dia olona antitra be. Mandeha ny fitsangatsanganana fiara-mpitory.
for - Mety amin'ny fanovana matetika ny traikefa. Angamba fitsangatsanganana no tena mahazo aina. Aza mandany andro mitsangatsangana, satria mandritra ny dia dia afaka hahafinaritra ianao, manatrika fitsaboana spa, efitrano fisakafoanana sy dobo, mihinana sakafo fisakafoanana sy fisakafoanana isan-karazany. Isan'andro sy Sunsets miavaka any an-dranomasina! Rivotra ranomasina. Ny fitsangatsanganana toy izany dia miala sasatra indrindra amin'ny hozatra. Ny fahadiovana sy ny serivisy amin'ny takelaka fitsangantsanganana dia fibaikoana avo kokoa noho ny trano fandraisam-bahiny. Mora ny misakana ny sakana fiteny. Ny mpiasa dia mazàna mahalala ny fiteninao.
manohitra - Aretina mikiky. Ny soritr'aretiny dia mora manimba ny fialan-tsasatrao. Ankoatr'izay, tsy ny olona rehetra te hahita ny ranomasina isan'andro ary tsy mahazo milomano ao. tsy mety ho an'izay matahotra ny rano na tany malalaka malalaka. Ankoatr'izany, mazàna mifankahalala amin'ny kolontsaina sy ny zava-misy any amin'ireo firenena notsidihina, dia tsy be dia be ny fotoana. Ny fanamafisana dia bebe kokoa amin'ny mandany fotoana amin'ny liner. Na manao ahoana na manao ahoana ny haben'ny sambo, dia fetra voafetra miaraka amin'ny andiany voafetra. Matetika ianao no mitsidika tanàna misy seranan-tsambo, ary tsy mahaliana indraindray.
Eto isika dia hiresaka momba ny tena lehibe indrindra amin'ny fikasana fitsangatsanganana mahaleo tena.
Ny tena voalohany sy tsotra indrindra dia ny mankany amin'ny pejy mpikarakara fitsangatsanganana Journey-Assist izay hahitana mazava tsara ny drafitry ny hetsika ary ho eo ambany fifehezanao. Fa ho an'ny hevitra iray ankapobeny, eto ambany no dingana voalohany amin'ny fandaharana fitsangatsanganana mahaleo tena.
teti-bola. Mila manangona fampahalalana voalohany momba ny vidin'ny tapakila, vidim-piainana ianao, fandaniana isan'andro amin'ny zava-pisotro, fitsangatsanganana, famindrana. Mazava ho azy, aza adino ny vidin'ny fiantohana, visa (raha ilaina).
Lalana sy programa fijanonana. Hahafantatra ireo fijery sy toerana mahaliana eto amin'ny firenena izay alehanao. Raha manana zanaka ianao dia fantaro tsara ny fisian'ny fotodrafitrasa sy ny fialamboly ho azy ireo. Miorina amin'ity fampahalalana ity dia atorio moramora ny lalana sy ny fizotry ny fihetsik'izy ireo.
antontan-taratasy. Pasipaoro (ho azo antoka fa misy pejy maimaimpoana, ary mbola misy 6 volana alohan'ny hifarana ny antotan-taratasy). Aza hadino ihany koa fa hikarakara fitantananana ara-pahasalamana. Raha ilaina dia alaivo mialoha ny visa. Ao amin'ny tranonkala masoivoho manokana dia misy ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny fitsipika ahazoana visa isan-karazany.
Fividianana na famandrihana tapakila. Ny fomba iray mety dia ny fandalinana ireo loharanom-pahalalana vaovao amin'ny agregatorika amin'ny Internet izay natao hikaroka sidina an'habakabaka an-jatony manerantany mba hikarohana ireo tolotra mahasoa indrindra ho anao. Na, na ny tsotra indrindra ary tsy dia mahomby dia ny fitsidihana pejy ny loharanon-tsaintsika natao hamahana ny tinona no asa.
Famandrihana hotely. Tahaka ny an'ny drafitra teo aloha, ity asa ity dia afaka manampy koa. pejy amin'ny loharanon-karena. Na, miverena manampy ny Internet, izay ahitanao tranonkala manokana - mitady agregator ho an'ny hotely. Aza hadino ny mandinika ny famindrana ny toerana hahatongavan'ny firenena mankany amin'ny hotely.
Fiampangana eny an-dalana. Hiresaka momba ny entana sy fitaovana ara-teknika izay ilaina amin'ny fitsangatsanganana amin'ireo faritra mety amin'ity pejy ity izahay.
Aza adino ny hikarakara fa mifanaraka amin'ny tranonao ny zava-drehetra mandritra ny fialan-tsasatrao. Ka dia alefaso ny voninkazo, ary tantanie ny biby. 🙂
Soso-kevitra vitsivitsy momba ny fomba hamonjy amin'ny fitsangatsanganana ny rivotra:
fampiasana tolotra manokana avy amin'ny sidina. Matetika izy ireo dia manomboka amin'ny faran'ny vanim-potoana, na ny fanokafana lalana vaovao. Fa aza adino fa ny tolotra manokana dia matetika voafetra amin'ny fisintomana tapakila na ny alalana avy amin'ny kitapo omena.
Misoratra anarana amin'ny takelaka fiaramanidina tianao ianao, na amin'ny tranonkala aggregator. Ka alefa aminao ny fanolorana fanomezana rehetra sy fampahalalana mahaliana momba ny fampiroboroboana.
Tsara homarihina fa ny agregator dia afaka manombatombana ny fahafahanao miorina amin'ny fividiananao tapakila teo aloha. Ary ny sasany amin'izy ireo dia mety hampiditra tsara ny vidin'ny tapakila ho anao fotsiny. Noho izany, amin'ny tranga sasany dia aroso ny mandeha any amin'ny tranokala fiaramanidina na tranokaran'ny aggregator amin'ny fomba incognito na aorian'ny fanesorana mofomamy ao amin'ny navigateur. Ary na ny lafin-javatra iray tahaka ny fitaovana ampiasainao momba ny tapakila aza dia mety manana anjara toerana. Ary mety ho na izany aza fa rehefa mitady tapakila avy amin'ny iPhone na iPad, dia mety ho kely ihany ny vidiny fa avo kokoa. Na tsara kokoa aza, raha mampiasa ny programa tsy anony anarana, izay manafina ny fitaovana sy ny toerana. Hatramin'ny zava-dehibe koa ny toerana. Ohatra, serivisy tolotra ho an'ny mpampiasa avy any Eropa dia ho lafo kokoa noho ny mpampiasa avy amin'ny firenena CIS.
Orinasa ambany sidina. Ireo dia mitondra fiaramanidina an'habakabaka ahafahana manidina ara-toekarena noho ny fandavana ny serivisy mpandeha sasany. Ohatra, kitapo maimaimpoana na sakafo eny ambony sambo misy kojakoja kely :). Ny zotram-piaramanidina lafo vidy dia mamonjy ny volany tsy ho an'ny serivisy ihany, fa amin'ny faniriana mihazona fiaramanidina tanora ihany koa, izay midika fa mahalana izy ireo no mila mandany vola amin'ny fanamboarana (aorian'ny roa na telo taona ampiasana fiaramanidina ambany dia lafo ny fiaramanidina fiaramanidina). Ary koa, ny elanelan'ny seza amin'ireny fiaramanidina ireny dia kely kokoa (74-76cm, fa tsy ny mahazatra 81-96cm), izay midika fa afaka mitondra mpandeha maromaro ianao. Ny seranam-piaramanidina lafo vidy dia mampiasa seranam-piaramanidina lavitra ny toerana malaza tsy dia malaza, izay midika fa kely kokoa ny vola azony amin'ny fiaramanidina amin'ny fampiasana. (ho an'ny mpandeha iray, dia io angamba ny vidin'ny famindrana fanampiny).
Raha mividy tapakila avy amin'ny zotram-piaramanidina lafo vidy dia ho azo antoka izany tandremoe ho an'ny fandoavam-bola tsy mazava. Toy ny fandoavam-bidy misimisy ho an'ny sakafo eny ambony sambo, na kitapo na vola fisavana miditra amin'ny sidina. Ary ny tena zava-dehibe, saika azo antoka, ireo tapakila novidina avy amin'ny zotram-piaramanidina lafo dia tsy azo ovaina. Ho an'ny zavatra rehetra ilainao dia andoavana ny hetra.
Torohevitra vitsivitsy momba ny fisafidianana hotely
Raha tsy matory rehefa tabatabae làlana, zahao jerena moa fa ohatrinona mitabataba any amin'ny trano fandraisam-bahiny. Afaka ao Google Maps jereo. misy làlan-dàlana lehibe eo akaiky eo, eo amin'ny toerana akaiky anao ny alim-pandihizana na fialamboly hafa izay manangona mpizaha tany. Tandremo ny taonan'ny trano fandraisam-bahiny (ny daty nanombohany dia aseho matetika ao amin'ilay famaritana). Raha a tsy mbola tanora ny hotelyavy eo dia misy ny fihoaram-pefy avo lenta amin'ny tsy fahita firy amin'ny fikandrana taloha.
Tandremo tafiditra ao daholo ny fandoavam-bola rehetra amin'ny sarany voalaza ao amin'ny tranonkala. Matetika, rehefa mandoa vola, zavatra efa voasoratra amin'ny pirinty kely dia efa nipoitra, ohatra, 10 isan-jato hetra na fanangonana amin'ny fanadiovana isa.
Azafady azafady mba hahitana Wi-Fi, fiantsenana, sakafo maraina... Izany rehetra izany dia afaka mampiakatra ny vidim-piainana raha ampitahaina amin'ny tarehimarika voalaza voalohany.
Ny trano fandraisam-bahinao dia toerana natao hanomezana anao fiadanam-po sy fialan-tsasatra aorian'ny andro mahafinaritra. Malina rehefa misafidy azy.
Torohevitra momba ny fomba hanamboarana tsara ny valizinao.
Mieritrereta aloha aiza ary nahoana mandeha ianao. Raha eny amoron-dranomasina ny fialan-tsasatrao, dia mila zavatra maivana sy akanjo hariva roa ianao. Raha misy fitsangatsanganana maro dia mila akanjo milamina sy milamina ianao. Ny tena tsara, ny akanjo dia tokony ho mora mifanandrify. Ny ambany indrindra kilasika dia ao amin'ny isa 5 4 3 2 1 . 5 akanjo ivelany. 4 akanjo ambany. Kojakoja 3. Kiraro roa. Swimsuit 2 (raha ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina)
makiazy... Eto, mazava ho azy, miankina amin'ny lahasa sy ny fomba andanianao fotoana ny zava-drehetra. Any amoron-dranomasina, ohatra, dia tsy ilaina manokana na tsy ilaina mihitsy, ary ny masoandro, bibikely ary fomba fiarovana hafa dia ho sarobidy kokoa, zavatra maro no azo vidiana ary mahaliana eo no eo. ary ny zavatra toy ny shampoo, gel douche, savony, paty nify dia mety ho ao amin'ny hotely.
firavaka tsy mamporisika ny haka tafahoatra izahay. Ho fanampin'ny zava-misy fa afaka manintona ny saina tsy ilaina izy ireo, ary ny ahiahy tsy ilaina amin'ny fiarovana azy ireo amin'ny fialan-tsasatra dia ho be loatra.
Indraindray kitapo fanampiana sy fikarakarana manokana maro kokoa no hosoratana ao amin'ny faritra mety amin'ity pejy ity.
Socks sy akanjo ambany, azo avadika anaty fantsona iray ary apetrakao amin'ny kiraro, avy eo dia hamonjy toerana sy hiarovana ny kiraro amin'ny fiovana. koa, ny kiraro dia mety ho tranga ho an'ny solomaso na "fragility" hafa
kiraro, raha misy mpivady mihoatra ny iray dia tsara kokoa ny mametraka tsiroaroa amin'ny toerana samihafa mba tsy hifanaratsy.
Hevero ihany koa fa betsaka ny zavatra mety atao mividy an-toerana. Ary raha misidina mafana avy amin'ny ririnina mangatsiaka ianao, tadidio fa azo atao ny mandao ny zavatra ririnina any amin'ny biraon'ny lamba ankavia ao amin'ny seranam-piaramanidina, mba tsy hitondrana azy ireo na aiza na aiza miaraka amin'ny fialan-tsasatra raha misy ny fifindrana efa nomanina.
Tsarovy koa fa raha matahotra ianao fiarovana ny fisehon'ilay valizy, dia tsara kokoa ny hanamboarana izany amin'ny horonantsary fiarovana. Misy serivisy toy izany any amin'ny seranam-piaramanidina. (ny vidiny eo ho eo dia 5 dolara).
Ilaina tsara ny kitapo fanampiana vonjy taitra voalohany amin'ny dia rehetra.
Basic Travel Medkit:
Kit vonjy taitra ho an'ny ANJARA
Ho an'ny zazakely koa:
Antontan-taratasy tsy misy io dia tsy ho vita.
Mihabetsaka ny isan'ny olona mandeha any ivelany. Izany dia noho ny antony maro isan-karazany, avy amin'ny faniriana hahita izao tontolo izao, mankany amin'ny fitsangatsanganana orinasa (bebe kokoa momba izany eto).
Ny dingana farany "zaza", ireto dia zaza 14-16 taona. Amin'ity vanim-potoana ity, pasipaoro iray no omena alalana amin'ny fahazoana azy ID-karatra (fitantaran'ny pasipaoro anatiny). Ary koa, manomboka amin'ny 14 taona dia tsy nandefa sora-tànana ny ankizy, fa mametraka sonia eo amin'ny pasipaorony ihany koa.
Ao koa ny fiantohana maharitra, mazava ho azy ny hetsika tafahoatra dia azo ampidirina ihany koa.
Tsy maintsy mahatsiaro fa any Eropa overbooking voamarina (Fitsipika (EC 261/2004), toy ny ara-dalàna any Amerika. Any Azia, dia mandeha indraindray io asa io. Miankina amin'ny zotram-piaramanidina sy ny tranga tsirairay manokana. Any Rosia, Ukraine, Belarus ary ny firenena sasany, tsy mandoa onitra izy ireo, ary takiana ihany koa ny hanome sidina hafa na hamerenany ny vidin'ny tapakila novidina. Amin'ny maha-valim-pitondran-tena azy ireo, mazàna izy ireo dia manome fahafahana hanidina ny sidina manaraka amin'ny kilasy fandraharahana.
Tsy mampaninona ny fotoana ahatanterahana ny fanemorana anao amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany. Na dia ora iray monja aza ianao, dia mbola afaka manome onitra feno hatrany. Ny habetsaky ny fanonerana dia karamaina amin'ny euro ary miankina mivantana amin'ny halaviran'ny sidina. Ohatra, hatramin'ny 1500km, fanonerana 250 Euro, ary raha mihoatra ny 3500km dia 600 euroabout. Indraindray, ny orinasam-pitaterana dia afaka manolotra vazivazy fanonerana tapakila tapakila mandritra ny taona, nefa tsy mendrika ny manizingizina azy ireo, ary afaka mitaky vola ianao). Mandritra izany fotoana izany, ankoatry ny fanonerana, dia afaka mahazo sakafo fanampiny ianao eny an-tsambo, manatsara ny kalitaon'ny serivisy, manangona teboka fanampiny eo ambany fandaharam-pankatoavana. Ary raha mihoatra ny iray andro ny fanemorana, avy eo noho ny seranam-piaramanidina ianao dia hanana fotoana tsara hahafinaritra anao ao an-tanàna izay misy anao. Amin'ny ankapobeny, hanao ny zava-drehetra ny fiaramanidina ka tsy mahafa-po anao :).
Raha misy izany fiandohan'asa izany dia nanambara ny fitadiavana mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo vonona ny hiandry ny sidina manaraka izy ireo ho an'ny valin-kafatra. Raha tsy tsikaritra ireo dia manaisotra ny isan'ny mpandeha ilaina amin'ny sidina ny sidina. Nosafidiana araka ny fahaizan'izy ireo izy ireo, ho fitsipika, aleony ny olona tokan-tena mandeha tsy misy entana sy amin'ny tapakila mora indrindra.
Amin'ny toe-javatra inona, inona no azonao andrasana hahazo valisoa
Raha ny zava-mitranga amin'ny iray amin'ireo lisitra voatanisa dia ho azo antoka fa hamonjy ny rehetra antontan-taratasy, mpandalo board sy ny sisa. Ary azonao atao ny manao fangatahana samirery amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny fitarainana, na mifandray amin'ny serivisy manokana izay hanao izany ho anao 25% amin'ny vola offset (izay ho azony raisina ihany raha toa ka voavaha soa aman-tsara ny olana). Ny sandam-pitaterana dia manome lanja ny lazany, ary noho izany matetika, voavaha ho an'ny mpanjifa ny vahaolana.
Ny sasany amin'ireo serivisy ireo dia:
Izay fanontaniana voalohany hapetrakao eo alohanao dia pasipaoro ho an'ny zaza iray... Mandritra ny roa taona izao dia tsy azo atao ny miditra zaza ao anaty pasipaoron'ny iray amin'ireo ray aman-dreny, ary mila manao pasipaon-jaza feno feno ilay zaza. Vakio bebe kokoa momba izany ao amin'ny takelaka mifanaraka amin'ilay pejy Torohevitra mahasoa.
Nandeha niaraka tamin'ny zazakely... Raha ny fanamarihan'ny reny, amin'ity vanim-potoana ity, mandritra ny diany, ny ankizy toy izany dia mitondra fihetseham-po tsara indrindra ary miaraka amin'izay koa ny kely indrindra amin'ny ahiahy, satria ny fanovana ny diaper dia tsy olana, ary azonao atao ny manome sakafo ny zaza amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra (raha ampinonoina ny zaza), ary raha mila manafana sakafo ianao, dia tsy holavina any amin'ny cafe na trano fisakafoanana rehetra ianao.
Aza hadino torohevitra avy amin'ny dokotera, fa ny tontolo iainana antonony indrindra amin'ny zaza dia izy no ampiasainy. Noho izany, aza manararaotra ny dia mandeha any amin'ny faran'izao tontolo izao, ary mba hisorohana ny acclimatization sarotra sy ny acclimatization mifanohitra rehefa miverina any an-tanindrazanao ianao, dia manoro hevitra ny sidina manomboka amin'ny fahavaratra mankany amin'ny fahavaratra, na avy amin'ny ririnina ka ririnina. Tena zava-dehibe izany raha tsy nomanina ela ny dia. (hatramin'ny roa herinandro). Koa satria ny zaza dia tsy manam-potoana mba acclimatize.
Manoro hevitra izahay fa haka tapakila ho an'ny sidina amin'ny alina (na mihetsika) hialana amin'ny dia "mahafinaritra". Avelao ny zaza hatory am-pilaminana amin'ny fotoana mahazatra ary hahita nofy mamy, fa tsy fikarohana tsy voafehy, ny fomba hampiala-tena amin'ny toerana voafetran'ny fiaramanidina na lamasinina 🙂. Raha manidina mitovy daholo ianao amin'ny antoandro, dia karakarao ny kilalao tsotra mangina, tsy ampoizina hahafahanao miala voly amin'ny zanakao. Ho fisaorana farany, fenoy ny lalao finday na / na alefaso ny sariitatra ny findainao, dia hatoky tena ianao fa hilamina mandritra ny fotoana fohy :).
Raha misy tahotra sao hahatratra otrikaretina ny zaza (ohatra, any amin'ny firenen'i Azia Atsimo Atsinanana na Afrika na misy nosy) dia tadidio. Ny bakteria na aiza na aiza. Ary mila miatrika azy ireo ianao na aiza na aiza fomba mitovy - mitandrina ny fitsipika momba ny fahadiovana, ary aza avela handeha any amin'ilay toerana atahoranao ny tenanao :) ilay zaza.
Raha matahotra ianao fa mifidy ny zanakao ka tsy holaviny sakafo eo an-toerana, tianay ny mampahatsiahy anao fa any amin'ireo magazain'ny firenena mandroso be mpizahatany dia afaka mahita izay rehetra mihinana ny zanakao ianao. Nefa koa, tadidio fa ny zaza dia tena tia karokaroka, ary azo antoka fa ho liana amin'ny zava-baovao hitany hohanina amin'ny sakafo ao an-toerana ny firenena tompon-trano. Ho vahaolana farany, amin'ny cafe na trano fisakafoanana rehetra, noho ny volanao dia tsy handà ny handrahoana sakafo ho an'ny zanakao izy ireo lasopy tsotra na porridge. Fa na izany aza, miambina hatrany Ny hery fiarovana ny zazakely rehefa mandeha dia entana be loatra (fiovan'ny toetr'andro, fiovan'ny fizaram-potoana, be loatra ny fanentanana), satria sakafo, ity no (raha ny ankizy manokana indrindra) dia mendrika ny hieritreretana mialoha.
Raha any amin'ny tany tropikaly ianao (na amin'ny toetrandro mafana tsy mahazatra fotsiny) dia aza soratana mandritra ny fotoana maharitra ilay zaza amin'ny masoandro misokatra. Eto dia tsara kokoa ny hampitombo tsikelikely ny faharetana, manomboka amin'ny 5 minitra isaky ny laharana. Eny, takiana izy ireo headgear, tsara kokoa ny fotsy.
fitondrana... Zava-dehibe io. Ny zaza dia tokony hihinana tsy tapaka, misotro tsiranoka ampy ary matory be dia be. Tia miantehitra amin'ny fiainana ny tsimatimanota fahamarinan-toerana, sy mahazatra fitondrana izany indrindra no mora indrindra hitehirizana hatrany rehefa mandeha. Saingy tsy tokony hohadinoinao ny manome vola fanampiana amin'ny fanovana ny faritry ny fotoana, raha misy izany.
Ataovy azo antoka fiantohana ara-pahasalamana isaky ny ankizy. Alohan'ny handehanana dia tadiavo ny fampahalalana rehetra momba ny toerana misy fialam-boly mety.
Ataovy foana Internet и fifandraisana finday... Aza mitondra ny zanakao any amin'izay tsy hahazoanao azy.
Ary, angamba, ny lehibe indrindra. Ataovy fahatoniana... Ity no zavatra sarobidy indrindra tadiavin'ny zaza ao aminao amin'ny toe-javatra sarotra.
Fomba ahazoana vola rehefa mandeha
fahatsiarovana... Misy serivisy mahafinaritra toy izany Grabr.io, izay mampivondrona ireo mpandeha sy mpiantsena liana amin'ny fahatsiarovana avy amin'ireo firenena andehananao. Ny mpividy amin'ity serivisy ity dia mamela ny fangatahana ho an'ny entana tadiavina, manondro ny tambin-karama fa vonona handoa izy ireo, ary ny mpandeha dia manaiky ireo baiko ireo, mividy ny entana ary mitondra azy ireo. Samy liana amin'ny fiaraha-miasa toy izany ny roa tonta. Ity serivisy ity dia somary hyped ary mety hahita zavatra mahaliana anao ianao.
Raha manana lela famoronana ianao, dia mety atombohy amin'ny bilaoginao fitsangatsanganana... Na manorata lahatsoratra fotsiny momba ireo toerana tsidihinao. Betsaka ny vondrom-piarahamonina liana amin'ny fizarana lahatsoratra momba ny toerana sy toerana mahafinaritra. Any ianao dia afaka mandefa fanambaràna momba ny lohahevitry ny lahatsoratrao, na mahazo baiko avy amin'ny magazine misy lohahevitra maromaro hanoratra lahatsoratra momba ireo toerana mahaliana ao amin'ny firenena izay halehanao. Ho an'ireo bilaogera fitsangatsanganana, misy koa ireo "programa fandrafiana" rehetra avy amin'ny antokonolona hitady tapakila fiaramanidina, hotely, fanofa fiara ary safidy hafa ilaina ho an'ny mpizahatany.
Aleo miala ao an-tranonao. Azo inoana fa mitady vola tsy an-dia, fa amin'ny dia iray. Fantatra fa ny trano manofa trano na trano tsy miankina amin'ny tompona vola no tena mahasoa kokoa noho ny fametrahana hotely mitovitovy. Misaotra ny serivisy toy Airbnb.ru na Booking.com na ny toy izany, ny fanofa ny tranonao mandritra ny faharetan'ny dia dia asa azo tanterahina.
Maka sary... Betsaka ny banky sary stock any, mila ny sarinao.
Toy ny amin'ny lahatsoratra, magazine sy lohahevitry ny haino aman-jery maro dia faly faly mandray an-tanana ny atiny tsy manam-paharoa. Ao amin'ny tabilao manaraka "toro-hevitra mahasoa"izahay Andao isika handinika fangatahana maromaro ho an'ny fanaraha-maso sy sary fitsangatsanganana.
Fampiharana marobe mba hanomezana vola ny sarin'ny dia
Fotolia eo no ho eo... Ity fampiharana finday ity dia tena malaza eo amin'ny mpamorona, mpaka sary, ary ireo izay tsy maka sary foana. Tsy misy famerana ny foto-kevitr'ilay sary, afa-tsy ireo teboka vitsivitsy: Sakafo, Voninkazo, Pets. Ny toerana sisa tavela, mihoatra ny ampy amin'ny lohahevitra fitsangatsanganana. Maka sary ianao, manolotra azy amin'ny teny lakile (izany no tadiavin'ireo mpividy ho sary ny sary), ary atolotray mpanelanelana any Fotolia.
Twenty20... fampiharana miaraka amina hazavana mora sy eritreritra. Tahaka an'i Fotolia, azonao atao ny mampiditra sary sary fitsangatsanganana raha mbola tsy voarara ny sary. Ankoatr'izay, ity fampiharana ity dia manana endri-javatra mahaliana antsoina hoe Challenges. Ity dia karazana asa iray izay angatahana anao handefa sary ny lohahevitra iray. Mitohy mandritra ny andro maromaro izany, aorian'izay, ho an'ny sary tsara indrindra dia manome sarany mahafinaritra :). Azonao jerena ihany koa ny famahanana sary malaza. Amin'ny ankapobeny, fampiharana tena tsara. Manana famerenana tsara be dia be, izay raha mino ianao, dia tena afaka mahazo vola. Miasa ho an'ny iOS sy Android /
Clashot... Fampiharana iray novolavolain'ny iray amin'ireo mpilalao stock sary lehibe indrindra - Ity programa ity dia misy ny fiasan'ireo roa fampiharana teo aloha. Misy koa ny asa (antsoina hoe Tolotra), eo koa ny famonoana sary malaza. Misy safidy ihany koa mampifandray sary amin'ny geolocation, fikarohana amin'ny tenifototra (hashtags), ary ny fahitana mahita ireo sary farany narotsaky ireo mpampiasa izay mipetraka eo amin'ny toerana ara-jeografika eo akaikinao.
Scopshot... Ny fampiharana ny ekipa finnish dia mitovy amin'ny roa ambin'ny folo20. Ny fifantohana mitovy amin'ny lahasa (Asa). Tsy misy kasety ao, fa ny mifanohitra amin'izany dia misy lahasa lohahevitra maro. Ka andramo ny tenanao amin'ity fampiharana ity amin'ny fotoana mety. Voamarina raha ilaina izany. Etsy ankilany, ny app dia tsy tohanan'ny goavambe stock photo. Fa raha tsy izany dia tena marani-tsaina ny fampiharana. Betsaka ny hevitra tsara manamarina an'io.
Snapwire... American startup. Tanora sy mamorona. Asa isan-karazany. Eto dia azo antoka fa ho mora ny mahita ny toerana hampiharana ireo sary nalaina nandritra ny dia. Misy rafitra fitomboana mahaliana. Ary ny haavon'ny haavonao dia manjary mahaliana kokoa, ary noho izany dia betsaka ny karama azonao.
Foap... Avy any Eropa ilay fampiharana. Mahavita zavatra maro. Asa maro, lohahevitra maro. Manana banky sary azy izy, miaraka amina sary an-tapitrisany maro efa nangonina. Endri-javatra mahaliana iray dia ny fanaraha-maso ny fahamendrehan'ny sary amidy dia ataon'ny mpisera mihitsy, izay manome naoty ity na ity sary amin'ny baolina.
Eyem... Ny fampiharana dia mitovy amin'ny Instagram. Misy ny sivana sary namboarina efa fantatry ny maro, misy ny fisavana sary eo akaikin'ny toerana misy anao, misy ny asa, ary misy koa ny namahan'ny namana sy ny bankinao misy anao.